Sony Xperia 1: Qeexitaannada, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah | Androidsis
Sony Xperia 1: Calanka cusub ee shirkadda (Video)
Eder Ferreno | | La cusboonaysiiyay 26/02/2019 15:21 | Mobiles, Sony
Sony waxay nooga tagtay warar badan oo ku saabsan soo bandhigiddeeda MWC 2019, sidii la filaayay. Toddobaadkan dhammaadkiisa, ka hor intaanay dhacdadu bilaabmin, waxaa la helay in sumadda Japan ay naga tegi doonto isbeddello muhiim ah, ilaa waxay bedeleen magacii ay u kala safnaayeen taleefannada. Wax in ugu dambeyntii Waxaa lagu arkay iyada-dhamaadka-sare cusub, ee Sony Xperia 1.
Ka dib markii uu naga tagay laba qalab dhexdhexaad ah, Sumadda Jabbaan ayaa hadda soo bandhigeysa astaanteeda cusub. Waxay ku saabsan tahay Sony Xperia 1. Taleefan kulmaya waxa laga filayo qalab heer sare ah maanta. Awooda, waxqabadka wanaagsan iyo kaamirooyinka wanaagsan, sidii caadada u ahayd Sony.
Shaashadaha aan dhammaadka lahayn in aan ku aragnay aaladooda dhexdhexaadka ah inay mar labaad ka muuqdaan qaabkan. Dusha sare ee awoodda badan, oo ay shirkaddu dooneyso inay dib u soo ceshato qaar ka mid ah dhulka ku lumay suuqa casriga bilihii la soo dhaafay. Iyagu way ku adag yihiin, laakiin shaki la'aan waa tusaale loogu talagalay.
1 Sooc Sony Xperia 1
2 Sony Xperia 1: Dhammaan heer sare
Sooc Sony Xperia 1
Farxadda dad badan, waxaan arki karnaa in Sony wali taagan tahay iska caabinta darajada ama daloolka shaashadda. Kama helno mid ka mid ah astaamahan Sony Xperia 1. Shaashad dherer ah, oo leh tayo muuqaal tayo sare leh iyo awood saafi ah gudaha. Kuwani waa faahfaahinta buuxda ee taleefanka:
Faahfaahinta farsamada Sony Xperia 1
Tusaale Xperia 1
Screen 6.5-inji OLED oo leh 4K + qaraar iyo saamiga 21: 9
Gacaliye Snapdragon 855
Kaydinta gudaha 128GB (la ballaarin karo illaa 512GB oo leh microSD)
Kaamirada gadaal 12 MP f / 1.6 OIS Dual Pixel + 12 MP f / 2.4 xagal balaaran + 12 MP f / 2.4 Optical zoom OIS
Kaamirada hore 8 Xildhibaan FF
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 5.0 Dual SIM WiFi 802.11 a / c USB-C WiFi MIMO
Tilmaamo kale Faraha Sawirka faraha NFC Ilaalinta IP68 Dolby Atmos
Batariga 3.330 mAh oo leh lacag degdeg ah
Cabbirada 167 x 72 x 8.2 mm
Qiimaha Wali lama xaqiijin
Qaabkan waxay mar kale sharad ku dhiganayaan shaashad leh saamiga 21: 9. Sida moodelkeeda dhexdhexaadka ah, shirkaddu waxay si muuqata u yaraysay muraayadaha dhinaca taleefanka. Tani waxay u oggolaaneysaa Sony Xperia 1 inay nagu soo gaarto shaashaddan aan dhammaadka lahayn. Shaki la'aan, waxay u timaaddaa ikhtiyaar weyn marka ay timaado cunista waxyaabaha ku jira warbaahinta badan. Sidoo kale maxaa yeelay shirkaddu waxay ahmiyad gaar ah siisay dhawaaqa taleefanka.
Waxaan helnaa qaar ku hadla istiyooyin, marka lagu daro inuu la jaan qaadayo Dolby Atmos (laga helo Netflix, iyo kuwo kale). Maxaa u oggolaanaya dhawaaq dheeri ah markasta. Qeyb muhiim ah marka aad ku cuneyso waxyaabaha ku jira qalabka.
Sony Xperia 1: Dhammaan heer sare
Sida qeexitaannada kale, waxaan arki karnaa inay tahay meesha ugu sarreysa. Waxaan ka helnaa isla processor-kii aan shalay ku aragnay aalado kale oo heer sare ah sida LG G8 ThinQ ama LG V50 5G. Processor la yiraahdo waa Snapdragon 855, in kasta oo xaaladdan jirta, Sony Xperia 1 kuma imaanayso iswaafajin 5G ah. Maaha mid ka mid ah mudnaanta caanka Japan xilligan, ama sidaas ayay u eg tahay.
Waxaan heleynaa kamarad gadaal saddex laab ah. Sidaas awgeed waxay noqoneysaa taleefankii ugu horreeyay ee Sony ee saddex kamarad leh xagga dambe. Isku dhaf ah saddex nooc oo dareemayaal ah, dhammaantoodna ah 12 Xildhibaan. In kasta oo aad ugu mahadsantahay isku-dhafkan waxaad awoodi doontaa inaad sawirro waaweyn ku qaadatid Sony Xperia 1. Maaddaama aan leenahay isku-darka xagal, xagal ballaadhan iyo telephoto qalabka, kaas oo ballan qaadaya waxqabad wanaagsan.
Qaabkan, waxaa jira hal isku darka RAM iyo kaydinta. Marka ma jiri doonaan waxyaabo badan oo laga fikiro markaad iibsaneyso taleefanka dukaamada. Batariga ku jira qalabkan waa 3.330 Mah, xoogaa ka weyn kuwa moodellada dhexdhexaadka ah. Marka lagu daro processor-ka iyo tixgelinta inuu yahay shaashad OLED, waxay noqon kartaa in ka badan inta ku filan dadka isticmaala ee iibsada.
Hal dhinac oo adeegsadayaal badani hubaal raadinayaan waa meesha uu ku yaal dareeraha faraha. Ma ahan dhinaca, mana ahan shaashadda hoosteeda. Sony Xperia 1, waxaan ka heleynaa dareenka sawirka faraha hal dhinac. Waxay ahayd xalka ay shirkaddu u dooratay inay ka dhalatay kordhinta shaashadaheeda. Go'aan laga yaabo in uusan raalli ka ahayn qof walba.
Sidii horeyba ugu dhacday labada moodel ee dhexdhexaadka ah, shirkadda wax warbixin ah nama aadan siinin wax ku saabsan suuq geyntiisa. Ma garanayno goorta la bilaabi doono iyo qiimaha ay lahaan doonto markay ku dhufato dukaamada. Waxaan filan karnaa oo keliya isku-darka dhammaadka-dhamaadka xagga RAM iyo kaydinta.
Waxa aan ognahay waa inay suurtagal noqon doontaa soo iibso tan Sony Xperia 1 oo midabbo kala duwan leh. Isticmaalayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay kala doortaan: madow, cawl, caddaan iyo guduud qaybtan sare ee sumadda Japan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Sony » Sony Xperia 1: Calanka cusub ee shirkadda (Video)
Wuxuu shaaca ka qaaday qiimaha iyo taariikhda bilaabida ee Spain ee Nokia 9 PureView